Kutenda Intel | Kubva kuLinux
pandev92 | | Applications, Noticias
Ini ndichatanga nekujekesa kuti aya anongova maonero ako uye kuti anogona kunge ari akawanda kana mashoma kupatsanurika. Wese munhu anondiziva nekuve ndanga ndiri amd's crybaby kwenguva yakareba, kazhinji ndakanyunyuta kwakatenderedza pano kuti yangu radeon 4650 haina kushanda mushe, kuti yanga iine matambudziko mazhinji uye kuti kunyangwe iine yakanaka 3d yekumhanyisa, maererano ne2d kumhanyisa , Ini ndaigara ndichiita zvakashata zvakanyanya nemadhirowa epamutemo, ayo akagadziriswa zvishoma nevatyairi vemahara.
Saka raive gore rapfuura, muna Zvita, pandakafunga kutenga nekuvaka nyowani komputa chidimbu nechidimbu, uko zvese zvakashanda kekutanga uye ini ndaigona kugara murunyararo. Mukupedzisira ndakapedzisira ndatenga pc ine Intel core i5 3570k ( Intel HD4000) uye nvidia gt620, kuti ndikwanise kuyedza mutsauko uyo vanhu vazhinji vaindikurudzira nvidia, wainditsigira.
Pakupedzisira mushure mekuyedzwa kwakawanda nemiedzo, ndakazopedzisira ndagara neiyo Intel mifananidzo, ndakashamisika pamusoro pese nekuita kwandakawana mu chakra uye kwin, asi panguva imwe chete ndichifara nekuita muUbuntu, kwandakakwanisa kuyedza mitambo senge tf2, amnesia nevamwe, pasina chairo dambudziko uye nepashoma fps mutsauko, zvichienzaniswa nvidia.
Ndosaka ndichiti, ndatenda Intel nebasa rose, ndatenda nekuchengeta mutyairi wako akavhurika, nekutenda kuenderana nevaapi, pamwe nekumhanyisa kwakanaka kwe2d, nekuda kwekuvandudzwa kwazvino, ndatenda nekuti ndinogona kushandisa zvese zvinobuda mu mplayer ndisina kubvarura nekutenda yekugadzirisa kanenge mune yangu, iyo kubvarura kubvarura (chakra).
Mushure mezvose izvi ndinoshamisika, zvine zvazvinokosha kutenga here yekuwedzera nvidia mifananidzo, ine software yatinayo paLinux? Iyo Intel hd3000 / 4000 mifananidzo inoita basa rayo zvakakwana kune avo vasingade kushandisa mari zhinji, nekuti ivo havangouya chete muicore, asiwo muIntel Pentium ivy bridge.
Intel mifananidzo ndidzo chete dzinobvumidza iwe kuti ugone kushandisa yemahara distro zvakadzikama uye uine yakanyanya kumhanyisa pasina kuita zviuru zvezviwingi, uye nokutendeseka kunzwa kuti zvese zvinongoshanda, kuti kernel haisi kuzotyora mifananidzo yangu uye izvo Nechero kernel, ini ndinogashira akawanda akakosha ekuvandudza, haina mutengo.
Saka ini ndinogona kungoti, maita Intel uye ndinokutendai nezvamunopa kune Open Source!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Ndatenda Intel
watove ne3D kumhanyisa paLinux?
Ini handifunge kana sis kana kuburikidza nazvo.
that was sarcasm hahaha
Pindura kune shnkr3
Ndagara ndiine makadhi e-nvidia mumichina yangu ye linux uye handisati ndambove nedambudziko, kunyangwe ini ndichigara ndichiisa madhiraivha nekuaodhaunirodha kubva kunvidia.
"Zvakakosha here kutenga supplemental nvidia mifananidzo, ne software yatinayo paLinux?"
Kana ichikosha yakanaka nVidia (yevanotyaira madhiraivha) kana iwe ukashandisa semuenzaniso Blender yekupa neGPU (Iine CUDA toolkit). Izvo zvimwe zvezvimwe zvirongwa zvinobatsira kubva kuGPU kumhanyisa. Uye ini zvakare ndinofungidzira kuti kana zvasvika kune yakakwira-inoda kuita mutambo, Intel lags kumashure kumashure. Intel mune Graphics Hardware ichine nzira refu yekuenda kunotora kukwikwidza (uye ini ndanga ndichifadzwa nerunyerekupe uko Intel yaizotenga nVidia). Kunyangwe akanakisa APU kubva ku AMD anodarika zvakapetwa 3dMark mamaki ezvakanakisa kubva kuIntel.
Asi ini ndinopa zvizere rutsigiro rwangu kune Intel yekuchengetedza danho remahara mutyairi. Kunyangwe yangu inotevera CPU ichave zvakare i5-3570k kana i7-3770k, uye ndinovimba kuva neruzivo rwevashandisi kana zvasvika pamifananidzo uye zvinyorwa.
PD ingangoita offtopic: Wakave wakakwanisa here kupfuudza iyo 3570k paGNU / Linux, kana kuti yakavezwa neyakaganhurirwa kernel?
Ndine iyo yakavharirwa uye ini handina kumbove nematambudziko oO
Kungosimbisa, wakamboedza here kuti iyo mic inomhanya pane yakawedzeredzwa kumhanya muGNU / Linux?
Nekuti chinhu chimwe ndechekuti mukumisikidzwa kweBIOS isu takapfekenura, asi chimwe chinhu ndechekuti GNU / Linux inobvumidza iyo Hardware kuti ishande nekukwirisa kupfuura iyo inogona "kuverenga" mukushanda kwakachengeteka.
Parizvino kubva pane zvandinoona, inomhanya pa4,2 Ghz, saka ndinofunga zvese zviri chokwadi correct
Ok, ini ndinogara ndakadzikama uye ndinoshandisa mamwe mashoma mabhureki pane yakawedzeredzwa CPU kubva ku «K» nhevedzano 😉
Ndine kusahadzika pamusoro pekushandisa chirevo senge CUDA iyo inobata uye inogona chete kushandiswa neNVIDIA, ini ndinoda Opencl nekure
Ehe, ini ndinogara ndichida yakavhurika maratidziro uye / kana kuitiswa. Asi verenga iyo "Ini ndinoda" nokungwarira. Kana iri mu blender neCUDA panguva ino iyo inoshandura munguva inotora mukana wakakura weOpenCL, nekuti ini ndinoshandisa CUDA.
Zvisinei hazvo ini ndakabheja paO OpenCL uye nguva idzodzo dzichapfupikiswa nekuitwa kuri nani
Nenzira, sekuziva kwangu hapana mitambo yepamusoro-inodikanwa paLinux, uye kana vakauya, kana intel yaida kuti vamhanye, ini pamahwindo uye mac, ini ndaitamba 1920 x 1080, ese matema ops2 uye 1 (iyi iri pa mac) , kuBatman arkam guta, iine ruzivo pakati, uye ini ndakagara ndakagara pamakumi matatu fps, uye kana iwe ukaizadza zvishoma, unosvika makumi mana uye makumi mapfumbamwe evashandisi vasiri vatambi, vari vatambi veapo neapo, zvinouya kwavari kuti varege. Ivo vanofanirwa kungovandudza iyo 30d tafura muLinux.
Ini handisi mutambi, ndiri akatendeseka newe. Kana ini ndakamboisa mitambo, kwave kungove kuyedza imwe hofisi nyowani, asi ini handina kumbobvira ndairidza.
Asi ini handizive kana iwe uchiziva chero "gamer". Ivo vanoda iyo yazvino mutambo unowanikwa muFullHD pamwe nekugadzwa mune ultra ruzivo uye pane yakanaka fps. Zvakanaka, chokwadi nhasi ndechekuti Intel haina Hardware inogona kugutsa iwo hunhu.
Kana ini handizive kana parizvino muGNU / Linux pane mitambo inoda zvakanyanya, asi ndine chokwadi chekuti nekuuya kwaSteam (nenzira, mitambo yekutengesa), pachavepo.
Ini ndiri xD gamer, uye pandinenge ndichida kutamba pamawindows mune ultra hd, ndinotora radeon yangu 7870 ndoisimudza, asi kazhinji ndine Intel yakawanda, inopedza zvishoma uye zvese zvakanaka ^ ^. Valve mitambo haisi mitambo inoda yakawanda, hapana.
Idem. Iwe waingofanirwa kutaura izvozvo pamwe chete nekuita uye kugadzikana kwekuvandudza mukuburitswa kwega kwega, ivo vane rutsigiro rwuri nani kupfuura vamwe vavo muWindows. Kunyangwe ini ndichida AMD, chero bedzi ndichiramba ndichishandisa Linux mazuva ese, ini handifunge kaviri uye kusarudza Intel.
Chinyorwa chakakosha! 😀
Munyori ndiye INTEL
Joke, asi kunyangwe ini ndisina kana matambudziko neangu Akabatanidzwa pane zvirinani.
Zvakanaka, sekutenda ikoko HAPANA.
Aya makambani haaite chero chinhu kuita nyasha, ivo vanoona mukana mumusika unozvidzwa ne AMD uye nekukwiridzira kudiki kubva kuNvidia.
Asi hapana mubvunzo kuti kuzvipira kwaIntel kuGNU kunoenderana nesu tese.
Ndinovimba tarisiro yavo yakanaka ichabereka michero, nekuti izvozvi Nvidia anotaridzika zvakanaka pane Steam mune imwe yeanonyanya kufarirwa distros iyo inogona kupa iyo keke kuruma kukuru.
Rega ndione kana ndinonzwisisa.Saka kunyangwe iwe ukaita basa rakanaka uye uchizviita ne openource software ... "ndatenda asi kwete"? ... ndinoreva, kana vakasazviita nekuzvipira uye nehunhu, iro basa hariverengi, handiti? nekuti ndizvo zvinorehwa.
Sekuziva kwangu, hapana kambani inofarira, ivo vese vanoda chidimbu chavo che pizza uye kunyangwe ini ndinochinzwisisa, kana kuti iro basa rangu uye zvigadzirwa zvangu zvakagadzirwa kuitira kunaka kwevanhu ... zvakagadzirwa kuti zviwane mari uye nazvo zvinowedzera mwero vanhu vari X chimiro.
Pfungwa yandaida kutaura haisi yekuti haagamuchire basa rake kana sechipo kana kuti haarikoshese.
Asi kubva ipapo kuripa rukudzo kwaari nekuita izvo zvaanooneswa nebhizimusi, pane nzira refu yekufamba.
Nenzira imwecheteyo yandisingakwanise kutenda hurumende yeguta rangu nekugadzirisa mwenje weveruzhinji mumugwagwa wandinogara, huya, zvisinei nekuti zvinondibatsira zvakadii, ndiro basa ravo.
Iwo mabhenefiti anoenda kune vese avo vanoita chimwe chinhu kune zvakajairika zvakanaka pasina kusungirwa uye vasina kuve nechinangwa chero muripo.
YeIntel kukoshesa kwangu kwemaonero avo uye kushandiswa kwezvigadzirwa zvavo.
Musiyano ndewekuti kambani ine sekutanga kutarisa zvido zvayo
Ini ndinofunga chiito chakanaka, kutaura kuti maita basa nekuti mukuita imi munopa nharaunda ine matambudziko akawanda
Asi ini ndinonzwisisa pfungwa yako
Iwo makambani, vanoita zvavanoita, kwete kumirira kukutendai asi tikiti hombe, nei tichifanira kuvatenda?
Uff, pakupedzisira chirevo nematanho.
Unogamuchirwa, ndatenda kwauri nekuvimba neni 😉
Hahahahah, yakakura xD
Ndine laptop yangu ine intel chip, iyi yandinoshandisa izvozvi, uye chokwadi ndechekuti pc yangu neNvidia Privative inoshanda zvirinani negt yangu 440, pane yakakosha 2 duo 3..2Ghz, inomhanya zvirinani kupfuura yangu laptop i3 2310M ine Intel driver , kunyange hazvo ichokwadi iyo Intel inopindirana kwazvo.
Iwe murume, iyo gt440 haisi yekupedzisira mugumo! Zvakafanana nekutaura kuti Laptop ine radeon 5670 inomhanya zvirinani pane Intel ... nenzira, zvakare iyo Intel ine hd3000 mifananidzo ..., iyo isina simba senge 4000
nvidia achangobva kuburitsa tekinoroji nyowani inonzi optimus, iyo iri muvhidhiyo kadhi inouya 2: intel uye nvidia (yese iri mukati mevidia). Pane windows, kana application isingade mifananidzo yakawanda kudaro, inoshandisa intel, uye kana iko application inoda magrafiki mazhinji yakavhurwa, chirongwa ichocho chinoshandisa nvidia. Izvi ndezvemalaptop, sezvo iwe uchichengetedza simba rakawanda nekushaya nvidia inogara yakabatana - ye linux makadhi aya haashande zvakanyatsoita - chirongwa chinonzi bumblebee chakazvarwa chinoedza kuita izvi, uye zvazviri chatoita! asi kwete otomatiki; iwe unofanirwa kuvhura iwo mapurogiramu uchiti kuvhura pane Intel kana nvidia (:
unogona kutarisa zvimwe apa: https://fedoraproject.org/wiki/Bumblebee
Ndakagara ndichishandisa Intel .. pamwe ndosaka ndichiziva nezve iko kugadzikana kwauri kutaura nezvako ..
Ndine zvese kuti ndienzanise, uye kunyangwe iyo Intel mifananidzo iri EXCELLENT mune avo madhiraivha, kana iwe uchiienzanisa neiyo gt620, inova yepasi-kumagumo, Intel zviri pachena inofarirwa nekuti vese vanopa kuita kwakafanana, asi kuve nemhando yepamusoro madhiraivha emahara , unotoziva kuti ndeipi yaunofanira kusarudza.
Chinhu chakasiyana kana iwe uchienzanisa icho chepamusoro-kumagumo GPU.
Uye zvakare, zvinoenderana nePC yauinayo, maGPU anokurumidza (zvinhu zvakaita seDDR5 ndangariro uye izvo) kune mamwe madhiraivha eimba anofanirwa kuiswa (Uye tenda kunaka kuti izvo zveNVidia hazvipe matambudziko mazhinji seaya eADD).
Ami iyo g620 yaive inouraya kwandiri ine compiz chokwadi uye ini ndaisakwanisa kushandisa vdpau mu windows mode, chete mune yakazara skrini, asi pc yese yaizononoka: zvaive zvishoma kana zvishoma zvine hunhu ...
Ndine nvidia gt520 pane 64-bit debian OS uye ini ndingatoti zvinomhanya zvakafanana nema windows ane madhiri ekushambadzira anowanikwa mumadhodhi ekuchengetedza.
Ini ndinonyatsofunga kuti haugone kuenzanisa simba reiyo nvidia graphic inopesana neIntel, iyo inouyawo mukati me microprocessor pachayo.
Ndinoda kuziva kuti ruzivo rwe linux yeamd ine maay graph pane iyo micro, kubva pane zvandinonzwisisa, nekuisa ati giraidhi kadhi pachinzvimbo chekukanzura vanowirirana
Chaizvoizvo gt520 iri mune mazana matanhatu, iyo 600, saka irombo chaizvo. uye mune chero bhenji iwe uchaona kuti iri kuseri kweIntel hd610
Ehe, iwe unoreva APU + "discrete" mifananidzo. Ini ndinongova ne "htpc" timu yandisati ndapedza kuvaka izvozvi, mandiri kuda kuyedza zvamunotaura naApu Trinty A6 + neRadeon HD6670 ... ini ndine mubvunzo wakafanana newe.
Pindura kuna William_uy
Sezvo ini ndisiri kutamba mitambo inorema, Intel inondikodzera zvakanaka
Ndakagara ndichishandisa AMD, nekuti ini ndoda kutamba mitambo. Ini handina kuzvarwa muLinux, zvishoma nezvishoma ini ndiri kuyedza kushandisa yakavhurika sosi maturusi anoita zvakafanana neanobata muWindows.
Pasina nguva refu ndaisa Kubuntu 12.10 x64 uye ndakaisa madhiraivha eADD, aine dzidziso kubva kune isiriyo yewiki kwavari. Zvese zvinhu zvakandinakira, ndinogona kudzikama ndichitamba sosi-steki sosi, 150-300 fps uye tembiricha zvese zvakanaka (56 ° C)
Zvishoma nezvishoma ivo vari kuona musika uyo wanga uchikura muLinux, uye madhiraivha achavandudza, kana zvakadaro ndinofunga.
Yakanyanya kushata intel haibude ine accelerator bhodhi (izere), iine mashandiro akafanana kune iyo radeon 7950 kana zvirinani, kana iri mupi wemagirazi machipisi evanoungana vakanaka, senge msi kana gigabyte
Usazvitende, tichaona kuti matsva sei ma microprocessors, iwo magariro, anovimbisa zvakawanda pane zvavanotaura.
Ini ndinobvuma, mune dzino nguva kana paine kufarira kwakanyanya muGNU / Linux, izvo zvinhu zvinogona kuona anokunda zvingave kuvandudzwa kwehardware neIntel kuti ive nemifananidzo inogona kukwikwidzana neyekumusoro-kumagumo kweNvidia, (uye nguva dzese Mutsara mutsva wevagadziri unobuda, zvinoonekwa kuti vanofambira mberi nekusvetuka uye nemiganhu) uye kuvandudza kana kuburitsa kwevatyairi naNvidia.
Iyo kambani inobheja zvakanyanya munzvimbo idzi ichave iri isingazivikanwe mukundi, nekuti munyika ino yemahara software vanhu vanoita sarudzo dzakadzama pavanotenga michina yavo uye kwete chete kushambadzira.
Ivo havazombo gadzira magiraidhi akasimba kudaro, nekuti processor yacho yaizodhura mazana matanhatu emadhora xD, 600 +200 emifananidzo, iyo haisi chikamu chevashandisi iyo Intel inoda, Intel inoda mushandisi uyo asingade graphic ine simba-yakazvipira.
pamwero wekuti zvinhu zviende cpz mugore rimwe chete haina simba kana ichienzaniswa nevamwe, uye inenge ichiri yakanaka kutenga sarudzo, kana iwe waida, waigona, paizove nevatengi vazhinji vanofarira, zvimwe dai yaive yemahara zvachose, asi kana mutengo waizove chimwe chinhu Zvakakosha zvakanyanya, iyo cap inofanirwa kunge iri maeuro zana nemakumi matanhatu, pasina kurasikirwa nehunhu mune chero chinhu chayo. yemahara uye yekuita kwakanakisa. zvinhu zvakawanda sei zvingabuda mune chimwe chinhu chakadai.
Chokwadi, asi kune vanhu vatove vanobhadhara mitengo yakafanana yekubatanidzwa kweIntel CPU + Nvidia GPU, zvirokwazvo havangarambe kubhadhara zvakafanana kana vaisanganisira mutyairi wemahara wakanaka kubva kuIntel.
Zvese zvinoenderana neyakagadzirwa neIntel mune ramangwana.
Ndingafarire kutenga yakatsaurwa Intel vhidhiyo kadhi
Ini ndinomhanya nekuita kweinenge 7850 http://www.gpureview.com/Radeon-HD-7850-card-678.html
Zuva rinoitika!, Intel i5, haizodhura mazana maviri emaeuro, asi mazana matatu….
Makomendi ako anonakidza kwazvo, uye zvirokwazvo chinyorwa chinounza muswe 😀
Ini ndinongova nemubvunzo mumwe chete kumunyori weichi chinyorwa:
Paunoti "divisible" unoreva here "kugoverwa"? Nekuti izwi rakadai harimo muchiSpanish, chete muItaly (uye izvo zvinoitika, harina 'i'), zvirinani muchadenga chedu.
Ini ndiri muItari, izvi zvikanganiso zvinogoneka zvachose ...
Wataura chokwadi. Ndakave neelis grafiki kubvira 2007, uye inonakidza. Iyo ine ndangariro diki, uye yakachipa kwazvo, asi mitambo mishoma yanga yakaipa kwandiri pakushandisa windows, uye ini handina kumbobvira ndawana matambudziko nekumhanyisa girafu nechero hurongwa hwekushandisa Kunyangwe nevatyairi, kana simba kana chero chinhu, nemoyo wese, Intel, yakashanda uye netariro izvozvi muna2014 nechizvarwa chinotevera chema processor nema graph, kuti zvese zvinoenderera sepakutanga, asi zvirinani
Pindura kuna charlie
TuxInfo # 56 magazini inowanikwa
KDE: unogamuchirwa kune semantic desktop (chikamu 1)